Fantatry ny rehetra fa tsy mitovy amin'ny olon-dehibe ny vatan'ny ankizy. Ary ny fahasamihafana dia tsy amin'ny sehatra samihafa ao amin'ny vatana, fa amin'ny endri-tsaran'ireo taova anatiny ao amin'ilay zaza. Tsy tsiambaratelo fa ny fototry ny fahasalaman'ny zazakely dia ao amin'ny tsibolany, ao amin'ny mikroflora an'ny tsinay, izay ny fanalahidin'ny tsy fahampian'ny herisetra. Izany no antony mahatonga ireo moms hanandrana hampiditra sakafo vaovao ao an-kibon-dreniny, mba tsy handravahana ny fandanjalanjana marefo ao amin'ny volony. Saingy raha ny olon-drehetra dia mahafantatra tsara kokoa ny fizotry ny fampidinana ireo sakafo fanampiny, dia ny fanontaniana amin'ny hoe "rehefa azo atao ny manome mofo ilay zaza?" Mahavariana ireo reny tanora maro.
Noho izany, ireto ny fitsipika fototra amin'ny "fanandevozana":
Nanomboka nifankahalala tamin'ny ankizy talohan'ny taona ny mofo tamin'ny taon-drafitra fito volana. Azonao atao ny manolotra sombin-tsakafo manokana sy boaty zazakely.
Manomboka amin'ny valo volana dia afaka manitatra tsikelikely ny olom-pantatra ianao ary manolotra ny mofo kely avy amin'ny varimbazaha varimbazaha fotsy. Voalohany, ny habetsahan'ny mofo atolotra dia tsy tokony hihoatra ny 3 grama, ary amin'ny herintaona dia afaka mitombo ho 20 gr isan'andro. Matetika ny ray aman-dreny no matahotra hoe mihinana be loatra ny zaza iray na kely loatra. Aza manahy, satria ny zaza no tarihin'ny filàna anatiny ary mihinana araka izay ilainy.
Aza manandrana sy manolotra ny zazakely hatramin'ny roa taona an-tranon'ny mofo sy mofo miaraka amin'ny sakafom-biby isan-karazany, ohatra, miaraka amin'ny gera. Ho an'ny kibom-bovoka, ho lasa trosa tsy azo ihodivirana ireny fanandramana ireny, satria mbola tsy manana ny endriky ny digestive izy.
Na dia mofomamy mofomamy ary mety hiteraka faniriana na dia malodezhki mafy aza, dia omeo ho an'ny ankizy hatramin'ny telo taona dia mbola tsy mendrika izany. Ny rafi-pandehan'ilay zaza dia tsy afaka mandany ny habetsaky ny gluten sy oligosaccharides afa-tsy ao anaty mofo mivantana avy ao amin'ny oven.
Inona no mahasoa ny mofon'ny ankizy?
Maro ny reny, izay miady mafy amin'ny tavy marevaka, dia very hevitra: inona no tena ilaina ho an'ny mofon'ny ankizy? Ho an'ny vatan'ny zaza mitombo iray, ny mofo dia loharano tsy azo ivalozana amin'ny voankazo sy vitamina. Misaotra ny sombin'ny mofo dia misy ny fametrahana ny siramamy azo amin'ny sigara ary noho izany dia mihatsara ny fatran'ny digestion.
Ny alèin'ny zaza ho an'ny mofo
Aza hadinoina fa mofo misy vokatra azo avy amin'ny gluten, izay matetika misy tsindrona mampidi-doza, mba ahafahan'izy ireo manana zaza tsy ampy taona amin'ny endriky ny fihenjanana. Ny fomba hitrangan'izany tranga izany dia ny manaisotra na mametra ny fihinanana mofo, na ny manondrahana mofo tsy miankina.
Ahoana ny fomba fanaovana sonia ankizy iray ao amin'ny pasipaoron'ny vahiny?
Fitaovana avy amin'ny tobim-panafody an-dalam-pandrosoana ho an'ny mpandray anjara
Fihetseham-po amin'ny ankizy - fitsaboana
Fahaizana ara-panatanjahan-tena ho an'ny ankizy
Ahoana ny fomba ampianarana ny ankizy iray hanonona ny taratasy "p" ao an-trano - kilasy
Fanabeazana momba ny lahy sy ny vavy ao amin'ny jadona
Fitaterana ho an'ny ankizy
Manao kofehy amin'ny kodiarana
Tsy mankatò ilay zaza - 2 taona
Fanandramana mahaliana sy mampientanentana ho an'ny ankizy ao an-trano
25 ireo karazana fanavakavam-pirenena izay mamitaka izao tontolo izao
Hazo voninkazo ho an'ny ririnina
Sosa avy any Krasnodar ho an'ny ririnina
Ny rikoriko avy amin'Andriamanitra - ny fananana medikaly sy ny fanoherana
Musaka - sakafo mahasalama amin'ny sakafo grika, bolgara ary serba
Beyonce, tamin'ny fangatahan'ny vadiny, dia nanao lamaody
Ahoana ny fandresena ny fahamendrehana?
Ladybird - famantarana
Sarivongana nosy Pakistane
Adin-tsarobidin'ny vehivavy bevohoka - ahoana no ahavitana azy?
Ahoana ny fanalefahana ny volo amin'ny perioxide ny rano?
Tomato ho an'ny ririnina - fomba fitsaboana
Ny kapoaky ny vehivavy Nike